ရာထူးတက် ငွေကြေးအခက်အခဲကို အောင်မြင်စေသောအစီအရင် – Sharing
ရာထူးတက် ငွေကြေးအခက်အခဲကို အောင်မြင်စေသောအစီအရင်
ရာထူးတက် ငွေကြေး အခက်အခဲကို အောင်မြင်စေသော အစီအရင်
ရာထူးတက် ငွေကြေး အခက်အခဲကို အောင်မြင်စေသော အစီအရင်လိမ္မော် ရွှေထီး ဓာတ်ရိုက်ဓာတ်ဆင်ရာထူးတိုးတက်လိုသူများ /ကံနိမ့်၍ စီးပွားရေး အဆင်မပြေသူများ /အိမ်တွင်းရေး အပူသောကများနေသူများ/
ဈေးဆိုင်ရောင်းမကောင်းသူများ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ကံတက်ပြီး လာဘ်ပွင့်စေသော အစီအရင် ဖြစ်ပါတယ်။၁. ပြုလုပ်ရမည့် အချိန်က.တနင်္လာနေ့ နံနက် ၅နာရီ ၄၅မိနစ်ပါ။၂. ပြုလုပ်ပုံကတော့ ကြွေပန်းကန်ပြားထဲ လက်ဖက်အစိုကိုအောက်က ခင်းပြီး လိမ္မော်သီး ၃လုံးမှာ ရွှေထီး ၃လက်စိုက်တာပါ။
လိမ္မော်သီးက မည်သည့်လိမ္မော်အမျိူးအစား မဆို ရပါတယ်။၃. ဘုရားလှူရသည် မဟုတ်ပါ။ အိမ်ခေါင်းရင်းမှာ အမြင့်တစ်နေရာမှာ ထားပါ။၄. စွန့်ရမည့်အချိန်က သောကြာနေ့ ည ၉နာရီ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ဖက်နဲ့ ရွှေထီးကို စွန့်ပစ်ပါ။ လိမ္မော်သီးကို ခွာ၍ အထဲမှ အမွှာလေးများကိုပါ တစ်ခုစီမွှာပါ။
အခွံများ အသီးမွှာများနှင့် အစေ့များ အားလုံးကို အိပ်တစ်လုံးတွင် စုထည့်၍ ချောင်း/မြစ်/ကန် တစ်ခုသို့ စွန့်ပါ။ နောက်တစ်နေ့ နံနက်မှ စွန့်လို့ရပါတယ်။၅. ၃ကြိမ် ၃ပတ်ဆက်တိုက် ပြုလုပ်ပါ။credit
ရာထူးတကျ ငှကွေေး အခကျအခဲကို အောငျမွငျစသေော အစီအရငျ
ရာထူးတကျ ငှကွေေး အခကျအခဲကို အောငျမွငျစသေော အစီအရငျလိမ်မျော ရှထေီး ဓာတျရိုကျဓာတျဆငျရာထူးတိုးတကျလိုသူမြား /ကံနိမျ့၍ စီးပှားရေး အဆငျမပွသေူမြား /အိမျတှငျးရေး အပူသောကမြားနသေူမြား/
ဈေးဆိုငျရောငျးမကောငျးသူမြား ပွုလုပျနိုငျပါတယျ။ကံတကျပွီး လာဘျပှငျ့စသေော အစီအရငျ ဖွဈပါတယျ။၁. ပွုလုပျရမညျ့ အခြိနျက.တနင်ျလာနေ့ နံနကျ ၅နာရီ ၄၅မိနဈပါ။၂. ပွုလုပျပုံကတော့ ကွှပေနျးကနျပွားထဲ လကျဖကျအစိုကိုအောကျက ခငျးပွီး လိမ်မျောသီး ၃လုံးမှာ ရှထေီး ၃လကျစိုကျတာပါ။လိမ်မျောသီးက မညျသညျ့လိမ်မျောအမြိူးအစား မဆို ရပါတယျ။၃. ဘုရားလှူရသညျ မဟုတျပါ။ အိမျခေါငျးရငျးမှာ အမွငျ့တဈနရောမှာ ထားပါ။၄. စှနျ့ရမညျ့အခြိနျက သောကွာနေ့ ည ၉နာရီ ဖွဈပါတယျ။ လကျဖကျနဲ့ ရှထေီးကို စှနျ့ပဈပါ။
လိမ်မျောသီးကို ခှာ၍ အထဲမှ အမှာလေးမြားကိုပါ တဈခုစီမှာပါ။အခှံမြား အသီးမှာမြားနှငျ့ အစမြေ့ား အားလုံးကို အိပျတဈလုံးတှငျ စုထညျ့၍ ခြောငျး/မွဈ/ကနျ တဈခုသို့ စှနျ့ပါ။ နောကျတဈနေ့ နံနကျမှ စှနျ့လို့ရပါတယျ။၅. ၃ကွိမျ ၃ပတျဆကျတိုကျ ပွုလုပျပါ။credit
လေးဘကျနာ အတှကျ သကျသာစမေယျ့ သဘာဝဆေးစှမျးကောငျး တဈလကျ